I-TY BERGAT - I-Airbnb
Pouldouran, Brittany, i-France
Indlu yamatshe yaseBreton esendaweni eyingqayizivele phakathi komhlaba nolwandle ehlanganisa phansi: Igumbi lokudlela (isitofu sokhuni) elifakwe futhi lifakwe izinto ikhishi elivulekile, igumbi lokugezela, indlu yangasese ehlukene, ilondolo.
Phansi: indawo yokulala (abantu abangu-2) i-mezzanine, igumbi lokulala elilodwa
Ingadi ye-Bucolic endaweni ethule. Indawo encane yokuthula lapho ungaphumula khona futhi uphumule, uzobe useduze nogu: PAIMPOL -TREGUIER- PERROS- GUIREC.
Umhlobiso ococekile futhi othokomele, isimo esifudumele nesithokomele sokuchitha isikhathi esingenakulibaleka e-Brittany. Ungakwazi ukujabulela ukuhamba futhi uthole leli chweba elincane langaphambili le-schooners elinyakaziswa amagagasi. Indawo esondelene ebukekayo kanye nemvelo yale ndlu etholakala kahle ukuthola i-Trégor nendawo eyizungezile.
Kuzoba etafuleni lakho kanye nezihlalo zengadi, isambulela, isihlalo sedekhi kanye nezoso ukuze usetshenziswe ngaphandle. Isiqandisi esingaphakathi, uhhavini, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, isitofu segesi, isiqandisi, umenzi wekhofi wase-Italy, i-espresso, umenzi wekhofi kagesi wakudala, i-toaster, i-microwave, i-ayina ibhodi ne-ayina, i-TV, i-inthanethi, isihlalo esiphezulu, zonke izitsha ezidingekayo,
Amashidi anikeziwe kanye nemibhede eyenziwe lapho ufika, amathawula awanikezwanga. Izinkuni zesitofu ezizocaciswa uma ubhukha . Izilwane ezifuywayo zamukelekile
Idolobhana elinikeza abahambi ubuqiniso nobungane, amabhishi anesihlabathi acishe abe yimizuzu eyishumi nanhlanu kuphela (ichweba elimhlophe nezindunduma zalo, iPlougrescant nendlu yakhe phakathi kwamadwala, umsele weTalbert indawo ephawulekayo yogu lwethu, kanye nechweba elincane lasePaimpol).